Ny programa fanodinana Apple dia manampy amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ny fizarana fanodinana Apple ao amin'ny tranonkalan'ny Apple's American dia efa nampiana ny Apple Watch, izay maodely rehetra amin'ny famantaranandro marani-tsaina an'i Apple dia azo alefa any Apple mba hahafahany mampiasa indray izay azony atao amin'ny fitaovana sy mamerina mamaky azy io amin'ny fomba mahomby. Apple dia nanamboatra vokatra fanodinana nandritra ny taona maro ary mpivady fotsiny Robot «Liam» no nampiana ho tonga lafatra amin'ity asa ity izay nasongadina tamin'ny mari-pamantarana marika mihitsy aza.
Tsy misy fisalasalana ny resaka fanodinana izay azo atao rehetra dia zava-dehibe Mba hanatsarana ny tontolo iainana sy hikarakarana ny planeta, Apple dia efa niroboka ela tao anatin'ity asa ity ary manolotra ezaka bebe kokoa hatrany. Ankehitriny, fitaovana iray hafa izay manatevin-daharana ny lisitry ny Apple amin'ity fizarana ity ny Apple Watch.
Raha salama tsara ny Mac na iPad anao dia azonao atao ny manakalo izany amin'ny Internet na amin'ny Apple Store ary Apple dia handoa anao kely amin'izanyRaha tsy miasa intsony ny fitaovana na tsy manana sanda intsony dia azonao atao foana ny manary azy amin'ny alàlan'ity programa Apple ity izay mamela ny fanodinana ny iPad, iPod, Mac, PC, smartphone ary izao any Etazonia ny Apple Watch. Mazava ho azy fa tsy mila mandoa na inona na inona ilay mpampiasa manampy mamerina manamboatra solosaina. Raha manana fitaovana betsaka haverina simba isika amin'ny maha orinasa na sekoly antsika dia manao fihenam-bidy ho azy i Apple rehefa mividy fitaovana vaovao.
Ny fizotrany fanodinana dia azo alaina amin'ny vokatra rehetra tianay hoentina any amin'ireo magazay izay ananan'i Apple manerantany, anisan'izany ireo Espaniola. Ireo solosaina ireo dia tsy maintsy miseho amin'ilay lisitra ananan'i Apple ho an'ny faritra fanodinana ary amin'ny tranga misy iMac, Mac mini, Mac Pro ary PC misy anao, dia tsy maintsy arahana mitovy amin'ny tranonkala an-tserasera an'ny orinasa. Amin'ny tranga rehetra, ny vola tokony horaisina amin'ny fanodinana entana dia homen'i Apple toy ny efa fanaony hatramin'izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Manampy an'i Apple Watch ny programa fanodinana Apple
Apple manitatra ny isan'ireo loko tarika misy amin'ny Apple Watch